निर्वाचनको हारपछि पार्टीभित्र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेतामा विजय भएसँगै पुनः दरिन पुगेका छन् । निर्वाचनमा पार्टी हारको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि भइरहेको दवाललाई उनले पन्छाउन सफल भएका छन् । काँग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्ननको लागि उठिरहेको बहस अब के हुन्छ ? धेरैको जिज्ञासाको विषय बनेको छ । संसदीय दलको नेतामा हारेपछि पार्टीको भागवण्डामा पौडेल पक्षधरको हैसियत कस्तो होला ?…विस्तृत समाचार »
यतिवेला काँग्रेसभित्र वैचारिक र सांगठनिक विवाद चुलिएको छ । पार्टी हारको जिम्मेवारी सभापति शेरबहादुर देउवाले लिनुपर्ने र नेतृत्व हस्तारन्तरण गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीका केही नेताहरु दिनदिनैजसो बैठक गरिरहेका छन् । उनीहरुले यसलाई पार्टी सुदृढीकरण अभियान नाम दिएका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवापक्षीय नेताहरुले भने यो अभियानलाई केही नेताहरुको उत्ताउलो हर्कत भनेर संज्ञा दिएका छन् । अवस्था यस्तै रहे पार्टी सुदृढीकरण अभियानको नाममा गुटगत भेला गरिरहेका…विस्तृत समाचार »
क्रेता र विक्रेतालाई सँगै भेट गराई ०.५ प्रतिशत सेवा शुल्कमै सेवा दिन्छौँ
हरेक मानिसको चाहना हुन्छ आफ्नो जीवनमा एउटा सुन्दर सपनाको घर बनाउने । घर बनाउनका लागि सुरुमा घडेरी जोड्ने चाहना हुन्छ । तर, आफुलाई अत्यावश्यक घडेरीको खोजी गर्न भने सममस्या पर्छ । त्यसो त, कतिपय व्यवसायिक र निजी प्रयोजनका लागि घर, अपार्टमेन्ट तथा महलहरू निर्माण भैरहेका पनि छन् । व्यवसायिक प्रयोजन होस् या निजी प्रयोजन, नेपालमा घर जग्गाको कारोबार निकै उच्च छ । घरजग्गाको कारोबार उच्च…विस्तृत समाचार »
​एक लाख रुपैयाँ बजेट लिन सिंहदरबार आउनुपर्ने, नेताको घरमा जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य भएको छ
स्थानीय निर्वाचनपछि अहिले स्थानीय तह सक्रिय भएका छन् । मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तह निर्माण भएका छन् । केन्द्रमा रहेका अधिकारहरु गाउँगाउँमा पुगेका छन् । दलहरुले त गाउँगाउँमा सिंहदरवार पुगेको दाबी समेत गरेका छन् । स्थानीय तह सक्रिय भएपनि प्रदेशसभाको संरचना बन्ने क्रममा छ । जसले गर्दा कानुन लगायत जनशक्तिका कारण काम गर्न गाह्रो भएको स्थानीय तहका धेरै प्रतिनिधिले गुनासो गरिरहेका छन् । कतिपय स्थानीय…विस्तृत समाचार »
‘बर्खामा पानीले डुब्छ, हिउँदमा शितलहर चल्छ, प्रदेश राजधानी किन विराटनगर बनाउने ?’
प्रदेशको राजधानी तोक्ने काम यति पेचिलो बनेको छ कि सरकार यो संवैधानिक दायित्वबाट पन्छने कोसिशमा लागेको देखिन्छ । उता प्रदेश राजधानीको माग राख्दै विभिन्न स्थानमा आन्दोलन चर्किन थालेका छन् । एक सातायता प्रदेश राजधानीकै विषयमा धनकुटा आन्दोलित बनेको छ । प्रदेश नं १ को राजधानी बनाउनुपर्ने माग राख्दै धनकुटावासी आमहड्तालमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनको नेतृत्व नवनिर्वाचित एमाले प्रतिनिधिसभाका सांसद राजेन्द्र राईले गरिरहेका छन् । आन्दोलनका…विस्तृत समाचार »
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताले अझै मूर्तरुप पाउन सकिरहेको छैन । दुवै पार्टीका नेताहरु एकताको लागि प्रतिवद्व रहेको बताइरहँदा पनि ठोस योजनाका साथ काम हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा वाम एकताको कुरा भावना मात्र सीमित हुने त होइन भन्ने शंकाहरु पनि उब्जिन थालेका छन् । नेतृत्वको व्यवस्थापनको प्रश्न र एमाले भित्रकै गुटउपगुटका कारण एकतामा बिलम्ब भइहरको अनुमान पनि गरिन थालेको छ । यसै…विस्तृत समाचार »
प्रदेशको नामाकरण र राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने बहस फेरि एकपटक चर्किएको छ । बढी विवाद प्रदेश १, २, ५ र ७ मा देखिएको छ । जनतादेखि नेतासम्म प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा विभाजित देखिएका छन् । यसले केही समय नेपाली राजनीतिलाई तरंगित पार्ने सम्भावना देखिएको छ । मधेश आन्दोलनको केन्द्रभाग रहेको प्रदेश २ को नाम मधेश प्रदेश नै होला भन्ने धेरैको आँकलन थियो, तर अहिले…विस्तृत समाचार »
सुनसरी क्षेत्र नंं. ३ मा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग झिनो मतान्तरले पराजित भएकी एमाले उम्मेदवार भगवती चौधरीले पुनः मतगणनाको माग गर्दै अदालत जाने बताएकी छिन् । मतगणनाका क्रममा सुरुवातदेखि नै अग्रता लिँदै आएकी चौधरीले अन्तिम समयतिर आएपछि विजय गच्छदारसँग ३ सय ६२ मतान्तरले पराजित भएपछि धाँधली भएको दाबी गरेकी हुन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत, सिडियो तथा प्रहरीको मिलेमतोमा…विस्तृत समाचार »
सप्तरी २ मा यादव भर्सेस यादव : उमेश भन्छन्, ‘भगौडा उपेन्द्रलाई कम्तिमा ५ हजार मतले हराउँछु’
१५ मङ्सिर २०७४
सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं २ को चुनावी प्रतिस्पर्धा धेरैको नजरमा परेको छ । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यही मैदानमा भिडिरहेका छन् । राष्ट्रिय नेताको छवी बनाइसकेका उपेन्द्रलाई काँग्रेसले पनि साथ दिएको छ । राजनीतिका पुरानै खेलाडी भएपनि यादव जातिको वर्चश्व रहेको सप्तरीमा भने उपेन्द्र नयाँ खेलाडीका रुपमा भित्रिएका छन् । यो क्षेत्रमा जातीय समिकरणले अर्थ राख्ने विश्लेषण गरिन्छ । तर, तिनै उपेन्द्रलाई चुनौती…विस्तृत समाचार »
​मतदाताको घर–घरमा पुगेपछि हितमानले भने– क्षेत्र नं. १० मा काकाकुल ठाउँ धेरै रहेछन्
१४ मङ्सिर २०७४
काठमाडौं क्षेत्र नं. १० विगतदेखि कम्युनिष्टहरुको गढ मानिन्छ । तर, ०७० को संविधासभा निर्वाचनमा कम्युनिष्टको गढ काँग्रेसले भत्काइदियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पराजित गर्दै काँग्रेसका राजन केसी ‘सेलिबे्रटी’बने । योपटक पनि केसी नै काँग्रेसका उम्मेदवार छन् भने उनलाई टक्कर दिन माओवादीका हितमान शाक्य वाम गठबन्धनको तर्फबाट मैदानमा छन् । १३ कात्तिक ०३० मा बाग्लुङमा जन्मिएका शाक्य तत्कालीन एमाओवादीबाट ०४६ को संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं.…विस्तृत समाचार »